Maamulka galmudug oo xalad dag dag ku soorogag deeganad ay maamulaan | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Maamulka galmudug oo xalad dag dag ku soorogag deeganad ay maamulaan
Maamulka galmudug oo xalad dag dag ku soorogag deeganad ay maamulaan
(wakaalada wararka somaiya warsom.com)
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa maanta xaalad deg deg ah kusoo rogay deegaanada uu maamulkaasi ka arrimo ee koonfurta gobolka Mudug kadib falal ammaan darro oo maal mahan kusoo badanaayey deegaanadaasi.
Maxamed Axmed Caalin Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in xaaladda koonfurta Gaalkacyo ay tahay mid gaar ah isla markaana lagu soo rogay xaalad deg deg ah.
Waxa uu sheegay Mr Caalin in ay shaqayn doonaan guddi isku dhaf ah kuwaasi oo ka shaqayn doona ammaanka iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka deegaanada Galmudug.
Deegaanada Galmudug ayaa waxaa muddooyinkan kusoo badanaayey falal ammaan darro kuwaasi oo soo bilowday kadib markii koonfurta Gaalkacyo lagu qafaashay shaqaale katirsanaa hay’adda DDG oo dhanka miino baarista qaabilsan.
Previous articleCiidamo katirsan daowlda oo dil, dhaawac iyo boob u geestay barakacayaasha dagmada wadajir
Next articleMareykanka oo diiday inay kenaya kacaweso dagaalka ay kula jirto xarkada al shabaab